Taona Iray Lavitra An’i Siria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2015 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Ελληνικά, Français, Español, русский, 日本語, polski, Italiano, عربي
Pikantsary avy amin'ny pejy gofundme an'ilay lahatsary “Art of Syrian Children on Nat Mall”.
Ampahany iray ity lahatsoratra ity amin'ireo andiany manokana nosoratan'i Marcell Shehwaro, bilaogera sady mpikatroka mafàna fo, hamariparitany ny zava-misy iainana ao Syria ao anatin'ny ady mitam-piadiana misy ankehitriny eo amin'ny tafika manohana ny fitondràna sy ireo izay mikatsaka ny hanongàna azy.
“Tokony ho nitomany aho.” io no hany zavatra mandalo miverimberina ato an-dohako rehefa tsaroako ilay zazavavy kely rotidrotika.
Tsy mahafantatra na inona na inona momba azy aho, ary tsy nahavita naminavina ny taonany avy amin'ireo sisa tavela taminy akory, fa tsaroako tsara ny fomba nijoroako teo, sahiran-tsaina. Tsy nidradradradra aho fony ry zareo nanangona ny sisa tevela taminy. Tsy nanandrana nanampy akory, tsy nanao na inona na inona, na kely aza. Nikirizan'ny vatako “adala” ny hitazona ny zavatra rehefa hitambatra, amin'ny fanaovana zavatra “voadinika tsara”. Iza amintsika no afaka manome famaritana ny atao hoe “voadinika tsara”, eo am-pitsanganana manoloana vatana mangatsiaky ny ankizivavy kely iray? Ary dia nohazoniko nitambatra io. Tsy nanao fihetsika hampivarahontsana aho, araka izay ahafantaran'ireo namako ahy. Raha ny marina, nisy olona nikiaka nitomany mafy tena nanelingelina ahy tany ambadika tany. Iza no sahy halahelo amin'ny toe-javatra tahàka ity, hoy aho mantsy ny tenako? Ny hany anjaran'ireo tavela teo dia ny fizakàna izany.
Tokony ho nitomany aho izany, saingy angamba androany aho mahay mizaka kokoa. Io no zavatra averimberiko amin'ny tenako isaky ny tonga amiko amin'ny nofy ilay zazavavy kely, any anatin'ireo fotoana ifaliako, any anatin'ny resako momba ny hoavin'ireo olona tsy foiko. Ny hoavy hoe? Inona no nanjo ny hoaviny?
Efa taona iray izay no nandaozako an'i Syria, angamba tsy hiverina intsony. Taona iray nandàvana, naha-meloka, nalahelovana ary nilavoana lefona. Tsy nisy maha-maherifo tavela ato amiko. Navelako any, ho an'ireo izay mety mila azy, ny faritra rehetra amin'ny vatako izay noezahany notazonina mba hahafahany miatrika ny ady sy ny baomba, ary dia voatsindry tanteraka ao ambanin'ilay antsoin'ny siansa hoe “dona” aho.
Tsy haiko hoe marary hatraiza aho no hiteny tahàka izany, saingy tsaratsara kokoa aho tany, akaikin'ny fahafatesana. Tolon'ny maherifo ny hafaliana, fanamby mandratra anaty eo anatrehan'ny fahafatesana, raha eto kosa ny hafaliana lasa enta-mavesatry ny fiampangan-tena tsy hita maso amin'ny fitsakotsakoana ireo tantara izay zatra niarahana tamin'ny namana nifampizarànay ny fiainana teny ampamakivakiana ny aloky ny fahafatesana.
Androany isika misintaka ny fiainana ny fandàvana eny an-tsisin'ny tanindrazanay, ny fandàvana hoe tena tafavoaka marina tokoa izahay. Ny fisintahana no hany tena fiainana any, “ao anatiny”. Maherifo no nandraisana ny fisianay tany, namelona aingam-panahy, zava-dehibe, ary ny tsirairay samy nihevitra daholo fa niankina taminay ny hoavin'ny firenena iray manontolo. Nanainga izahay ary namela ny firenenay ho tsy misy mpanohana. Aty ivelany izahay no mihetsika ho toy ny maherifo, saingy tsy mifanaraka velively amin'ny tokony ho izy io anjara toerana io taorian'ny nialanay tamin'ny fàka niraisana tany, avy any Aleppo ilay tanàna voabodo sy ireo trano samihafa. Nefa nisisika izahay mba ho toy ireo maherifo hatrany. Natahotra izahay ny hilaza amin'ireo maty amin'izao fotoana izao, tena olona niharam-boina fotsiny ihany izahay.
Nandritry ny herintaona dia tsy nahasoratra zavatra mba nisy lanjany aho. Fahitalavitra tsy misy dikany efa aman-taonina no nojereko—tsy namelàko raha tsy hitako manontolo ny Glee. Izany no fanombohana izay tsy niteraka ny fiafaràna mahazatra. Ny aloky ny fahafatesana nanaraka ahy teny rehetra teny nandritry ny fotoana ela.
Alaiko sary an-tsaina ny iray amin'ireo olon-tsy foiko maty amin'izay endrika herisetra rehetra mety hisy. Izaho manafosafo ny hany sisa tavela tamin'ny vatany rehefa voan'ny zava-mipoaka ny alina mialoha ny Taona Vaovao, ary alaiko sary an-tsaina raha tena very azy tokoa tokoa aho. Tsy ampy hanamaivana ny fahatsapantena lalina ho very zavatra ato amiko ny fisiany eto anilako. Ampy fotsiny ho azy ny nandeha ho aminà toerana iray hafa ho ahy mba hakàna sary an-tsaina ny ratsy indrindra ary manomboka izay efa masaka tao an-tsainy. Raha tsy nandre azy nifoka rivotra eo am-patoriana aho tsy mba nahatsiaro ireny vatana nanadino ny fomba fifohana rivotra ireny.
Nanaraka ahy ny aloky ny fahafatesana, hatramin'ny famonoana tena efa masaka an-tsaina sy ny faniriana hanaraka ireo namana izay nandao anay. Nijery manodidina ahy aho ary mahita maherifo marobe teo amin'ny fiainako, lasa nivadika tsikelikely ho avelo itambesaran'ny ahiahy. Niara-niaina izahay rehetra, niaraka tamin'ireo karazana fitondrantena samihafa tia mamotika, miainga avy amin'ny filofosana miasa sy ny fibobohana alikaola sy izay hafa azo niankinan-doha. Ho ahy, lasa niakin-doha tamin'ny fahatsapàna hirifiry noho ny fiheverantena ho meloka aho, izay mazàna no mivadika ho ratra eny amin'ny tànako, izay mbola ahitàna holatra tavela eo amin'ny hato-tànako havia. Mandainga aho rehefa anontaniana momba ilay holatra. Mandainga satria tsy eken'ny saiko hoe lasa ilay maherifo tato anatiko, angamba tsy hiverina intsony, ary ity olona niharam-boina ity no nisolo toerana azy.
Alaivo sary an-tsaina ny hoe tsy mino na inona na inona intsony. Tsy izay tsara na ny ratsy amin'ny olombelona, tsy ny tontolo na ny rariny ao aminy. Isanandro ianao manontany tena raha zo tena mendrika ireo rà nalatsaka ny fahalalahana. Lasa sivily ve ny tontolo? Tena afaka hitondra fiovàna ve isika? Maivan-danja noho izay noeritreretintsika tany am-piandohana ve ilay demaokrasia nonofinofisintsika?
Marina ve fa tena tsy afaka mitondra fiovàna tokoa ny olona raha toa ka lavin'ny dolara ny tsy hisian'izany? Tsy misy akaiky anao ireo zavatra efa zatra ninoanao; tsy misy eo akaikinao intsony ireo olona efa zatra nahafantatra ny tena maha-ianao anao. Maty ny fianakavianao ary hafahafa sy vaovao ny zavatra rehetra manodidina anao, ary mila mampifanaraka ny aminao aminy ianao, eny fa amin'ilay ianao vaovao aza.
Ary nandefa hafatra ho ahy ny namako ato amin'ny Global Voices manontany hoe: Maninona ianao no tsy manoratra? Ary menatra aho hilaza aminy fa nilaozako ny fanoratana. Navelako any toy ny zavatra hafa rehetra.
Na izany aza, ary hatramin'ny nitadiavako fanampiana, mibaboka aho androany—ary sambany no imasom-bahoaka—fa mandray tsy tapaka fanafody miady amin'ny rarin-tsaina aho nandritra izay fotoana izay. Miezaka manilika izay eritreritra rehetra momba ny fahafatesana, araka izay mety ho vitan'ny Siriana iray atao. Miverina mifandray amin'ireo namako ary manaiky ilay izaho niharam-boina ato anatiko. Malahelo azy aho, tia azy, mivavaka ho azy mba hahazo hery sy tanjaka ary faharetana, ary ny tena zava-dehibe indrindra mba hahazo famelàna.
Miezaka mifantina ireo singa rehetra tamiko aho mba hamerenana azy ireny ho amin'ny toerany, amin'ny fanantenana fa ny fanaovana izany dia hampahatsiaro ahy ny toerana nisy ny rantsan-tànako, ary dia ho afaka hanoratra indray aho.